ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် ဘာလုပ်နေလဲ ~ Myanmar Express
ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ ထူးဆန်းသော ဒေါက်တာကြီးFrom : ရက္ခိတတစ်ဦး ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ဆိုလို့ တစ်မျိုးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင် ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံယူထားတဲ့ ရခိုင်လွတ်လပ်ရေးပါတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက စစ်တွေမြို့မှ ရခိုင်သားတွေက ဦးအောင်သန်းဝေ နာဇီဈေးထဲမှာ ပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီး ရှာပေးဖို့ စစ်တွေရဲ့စခန်းရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါက်တာအေးမောင် ရောက်လာပြီး ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေက လက်မခံဘဲ ဒေါက်တာ အေးမောင်ကို ခဲနဲ့ပေါက်လို့ ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲစခန်းထဲ ၀င်ပြေးခဲ့ရတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲစခန်းကို ဆက်ပြီးတော့ ခဲနဲ့ပေါက်ပြီး ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာတော့ ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ ရဲစခန်း စားပွဲ အောက်မှာဝင်ပုန်းနေတယ်လို့ မျက်မြင်ရဲတွေက ပြောပါတယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ ရခိုင်တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဌအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေက ရခိုင်နဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်တွေ ရှေ့က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကို မပြောဘဲ ခုံအောက်ထဲဝင်ပုန်း နေတာ တော့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကြားရင် ရယ်စရာတွေ ဖြစ်နေမှာပဲ။ ဒါကိုလည်း ဒေါက်တာအေးမောင်က မရှက် မကြောက်နဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ စစ်တွေဆန္ဒပြမှုကို သူပဲဖြေရှင်းပေးခဲ့သယောင်ပြောခဲ့လို့ စစ်တွေမြို့သားတွေက ဒုက္ခတွေကြားထဲကနေ ပြောပြောပြီးရယ်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှာ ၀န်ထမ်းအဖွဲ့များ ချုံ့ခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း၊အသစ်ဖွဲ့ခြင်းများအား စနစ်တကျပြုရေး အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဆိုမှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုဦးတည်လျှောက် လှမ်းနေတာကြောင့် ရဲတပ်ရင်းများအား လျော့ချပေးစေလိုကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတင်ပြချက်အား မကွေးတိုင်း မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလှဆွေက ဘူးသီးတောင်-မောင်းတောဒေသဟာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ ၀င်ရောက် ကျူးကျော်နေတာကြောင့် တားဆီးရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ရဲတပ်ရင်းများ တိုးချဲ့ထားရှိကာ တားမြစ် ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကျူးကျော်မှုတွေကို မတားဆီးနိုင်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ကုလားပြည်နယ်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဒေါက်တာအေးမောင်၏ တင်ပြချက်ကို လွှတ်တော်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အဲဒီအဆိုသာအောင်မြင်သွားခဲ့ရင် မောင်တောနဲ့ စစ်တွေဒေသမှာရှိတဲ့ ရခိုင် လူမျိုးတွေဟာ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေသတ်လို့ သေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဒေါက်တာအေးမောင်က အစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ခေါင်းရှောင် တဲ့စကားကို ပြောနေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ရခိုင်တွေမှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်။ ရခိုင်ပြည် ရခိုင် ကိုပေး၊ ရှမ်းပြည်ရှမ်းကိုပေး၊ ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲမယ့် စကားကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ မပြောသင့်ဘဲ ပြောခဲ့လို့ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျသူမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။ စစ်တွေ၊ မောင်းတောမှာ ရခိုင်တွေပက်ပက်စက်စက် အသတ်ခံရ၊ အိမ်တွေမီးရှို့ခံရပေမဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်က ဘင်္ဂလီ လူမျိုးတွေ ရဲ့ရက်စက်မှုအကြောင်းကို မီဒီယာတွေက မေးမြန်းချိန်မှာ ဘာမှမပြောပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာဟာ အသည်းနာစရာပါပဲ။ ဒီလိုရခိုင်လူမျိုးတွေဘက်ကသာမရပ်တည်ပေမဲ့လွှတ်တော်မှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော် ဘက်ဂျက် ခွဲဝေတာကအစ ၀င်ရောက် ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကြားသိရပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ကို လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်တွေ၊ မောင်းတောအရေးအခင်းမှာ ရခိုင်တွေ ဘက်ကဘာမှ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိ၊ လွှတ်တော်မှာလည်း ဘင်္ဂလီအကြိုက် လုံခြုံရေးတပ်တွေကို လျော့ချပေးရေးတောင်းဆို၊ မြန်မာ တစ်နိုငံလုံး ၀ံသာနုရက္ခိတတရား နိုးကြားနေချိန်မှာ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆွံ့အနေတာက ရခိုင်လူမျိုး ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဖြစ်ထိုက် ပါဘူး။ ဒီလိုဖြုတ်ဦးနှောက်သာသာ အတွေးအခေါ်နဲ့ နဖာကလော်လောက်မှစောက်မနက်တဲ့ အကြံ အစည်တွေထွက်နေတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုယ်စား ပြင်းထန်စွာရှုံ့ချ ဝေဖန် လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။Myanmar Express
စောက်ရုပ်ကိုက ကျက်သရေမရှိ မအေလိုး
10 June 2012 23:48
အခွင့်ရေးသမား၊ လူလိမ်၊ အခုလဲဒီသောက်ကုလားနဲ. ပတ်သက်လို.ပြတ်ပြတ်သားသားဘာမှမပြောရဲပဲငြိမ်နေတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရခိုင်အမတ်လို.မပြောနဲ့၊ ကျုပ်တို.ရခိုင်သိပ်ခါကျ တယ်။
11 June 2012 00:04
MEရေ ကုလားတွေ ဘယ်လောက် သေပြီ ဆိုတာလဲ အတည်ပြုပေးပါဉီး
11 June 2012 01:39
ဆောက် ခွက် က၊ က လစ် ဒါး ပုံ ပေါက် နေ တယ်၊ ချီးထုပ် ဒီကောင် လည်း ခွေ ဇာတ် ခင်း ချင် နေ ပုံ ရ တယ်၊၊၊၊၊၊၊
11 June 2012 01:52
ဆောက်ခွက်ကိုက ကလစ်ဒါး နဲ့တူနေဘီ။
စောက်သုံးမကျတဲ့ခွေး နွား ဆေထိုးတဲ့ လူကြီးပါဗျာ။ ၇ပ်ကျေး ၇၀တ အဖွဲ့ ဝင်တောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ ဒုတိယသမတလုပ်ဖို့ တောင် မာန်တတ်ခဲ့ တယ်။ အခုလုပ်ပြန်ပြီ အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပေါင်းပြီး ကျေးဇူး၇ှင်လူကြီးတွေကို စော်ကားနေပြီ။ အမေ၇ိကန်တွေကို လည်း သတင်း လိမ်ပေးလိုပေး။ ငါတို့ အစိုး၇လူကြီးတွေကလည်း ဒီလို လောက်ကောင်ကို မှ လွှတ်တော်ထဲပေးဝင်တယ်။ ခံ၇ခက်ကြီး။ ဟေ့ကောင်တွေ လူကြီးတွေကို ပြောလိုက် ဒီကောင် နဲ့ဟို အမေ၇ိကန်သံ၇ုံးနိုင်ငံေ၇းဌာနက စာေ၇းတွေ မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေ ပေးနေတယ်။ ထိထိေ၇ာက်ေ၇ာက် အေ၇းယူဘို့ ပြောလိုက်။
11 June 2012 10:26
aw aw asint asint
11 June 2012 10:31
side street asint yway par lar
yes, anonymous,, you're right: illegal -immigrants more than that:in united state. moe tee lier.
ငကြောင် အေးမောင် အရက်ကြောင်ကြောင် နေရင်လဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ...တိုင်းပြည်ကို တပိုင်းစီ ဖဲ့ဖို့များစိတ်ကူးနေတယ်...ရခိုင်ကို ကိုယ့်ဘာသာ အုပ်ချုပ်မယ် ...ပြောနေသေးတယ်...ခုတောင် မင်းပထွေး ကုလားတွေ လိုက်သတ်နေလို့ ထွက်ပြေးနေရတာ မဟုတ်ဘူးလား...ရခိုင်ကို ထိုင်းတောင်ပိုင်းလို ဖြစ်စေချင်လို့လား...အရက်ဖိုး လိုချင်ရင်လည်းပြော ... လွှတ်တော် တက်ပြီး ရစ်မနေနဲ့ ..သိပ်ပြီး ဆဲချင်နေတာနော်...သတင်းတွေဖတ်ပြီး ဒေါသ ထွက်လွန်းလုိ့ ...
ဖြုတ်ဦးနှောက်တဲ့ ဘယ်သူရေးလိုက်တာလဲမသိဘူး. ဖြုတ်တွေ မတရားအစွပ်စွဲခံနေရပါတယ်. ဦးနှောက်တစ်စက်မှမရှိတဲ့ နွားကြီးလို့ပြောမှ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ အမျိုးဖျတ်မနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ ခိုင်းနွားကြီး ဒီကောင်သက်ဆိုးမရှည်မှ ကောင်းမှာပါ..
11 June 2012 22:10
all are good comment.